America Yoita Sachigaro Mutsva we Kimberley Process
Vachitaura nevatori venhau Ambassador Milovanonic vanoti vari kutarisira kuti mugore rino apo America iriyo sachigaro we Kimberley Process, vachaedza zvese zvavanogona kuti zvinhu zvinogara zvakakonzeresa gakava mu KP, zvigadziriswe
Sachigaro mutsva we Kimberley Process, Ambassador Gillian Milovanovic, vanoti pari zvino pasi rose mangoda anobva chete kubva ku Cote d'Ivoire ndivo anganzi mangoda asina kuchena kana kuti conflict diamonds.
Vachitaura nevatori venhau Ambassador Milovanonic vanoti vari kutarisira kuti mugore rino apo America iriyo sachigaro we Kimberley Process, vachaedza zvese zvavanogona kuti zvinhu zvinogara zvakakonzeresa gakava mu KP, zvigadziriswe.
Ambassador Milavanovic vanoti chido chavo kuti KP ibatane mukuita basa rayo. Va Dewa Mavhinga ndivo regional coordinator we Crisis in Zimbabwe Coalition. Vanoti havawirirani na Ambassador Milovanovic.
Va Mavhinga vanoti KP inofanira kuita zvose zvainogona kugadzirisa nyaya dzinonetsa dzemangoda zvikuru ku Zimbabwe kunyanya nyaya yekuti mangoda ekwaMarange anzi ma conflict diamonds.